Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Welsh Ethan Ampadu Child Story Story nke na-emeghi ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "Onye na-esote David Luiz“. Anyị Ethan Ampadu Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu aha ya, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe ya wdg.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ọ nwere maka ọdịnihu. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Ethan Ampadu nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Ethan Ampadu Nwa akwukwo akụkọ Plus ekwusighi ihe omuma Eziokwu- Ndụ mbido
Malite, aha ya bụ Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu. Ethan Ampadu mụrụ na 14 Septemba 2000 na nne na nna ya Mr na Mrs Kwame Ampadu na Exeter, United Kingdom.
Ethan sitere na agbụrụ dị iche iche. Nne ya nke a na-amaghị aha ya sitere na Wales ebe nna ya, Kwame bụ onye Ghana site na mbido. A mụrụ Ethan n'ezinụlọ na-eto eto na-ekele nna ya Kwame Ampadu, onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ Irish bụ onye na-egwuri egwu maka bọọlụ kachasị elu na Arsenal wee mechaa bụrụ onye nchịkwa maka ntorobịa ha na U18. Oh Ee!, Ị gụrụ ya na, obu Arsenal!
O nwere ike isiri nna Ampadu ike ịnagide ezumike nka. Ihe mbụ Arsenal kpakpando mgbe ọ lara ezumike nká kpebiri ịnọgide na-ebi ndụ nrọ ya site n'aka nwa ha nwoke bụ Ethan.
Ethan Ampadu obi ụtọ dị ka a hụrụ n'elu tolitere ụlọ akwụkwọ ụmụ nwanyị Ladysmith ebe ọ malitere ịkụ bọl asọmpi n'oge oge egwuregwu. I sonye n'egwuregwu bọọlụ ezughị. Ndị nne na nna Ethan Ampadu chọkwara ka nwa ha were ihe omume ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ kpọrọ ihe. Otu n'ime ndị a bụ mmemme mmemme Tudor nke ụlọ akwụkwọ ya.
Otu n'ime ihe omume kachasị amasị Ethan bụ nke ya Schoollọ akwụkwọ Ememe nke Anumanu ebe ọ ga-eji ejiji dịka anụmanụ, n'ọnọdụ a, ikwiikwii. (DevonLive Akuko)
Ụmụ klas ya amachaghị na nwata ahụ nke yiri akwa ikwiikwii ga-abụ otu Chelsea FC Star.
Ethan Ampadu Nwa akwukwo akụkọ Plus ekwusighi ihe omuma Eziokwu- Ndụ Ndụ Mmalite
Ọchịchọ Ethan nwere maka football hụrụ ya ka ọ debanye aha ya na ndepụta nke otu ndị ntorobịa nọ n'ógbè ahụ, Stoke Hill n'okpuru 10 nke nyere ya ohere ịtọ ntọala ntọala ọrụ ya.
Nke a bụ otu nna nna ya kụziri ndị U18 ha tupu ha akwaga na-elekọta ndị ntorobịa Arsenal. Ethan malitere igwu egwu Exeter City mgbe ọ ka nọ n'ụlọ akwụkwọ n'ihi mkpebi nne na nna ya. Ma Ethan na ndị mụrụ ya kwetara na ọ ga-aga n'ihu na agụmakwụkwọ ya ruo mgbe ọ ga-enweta GCSEs.
Ijikọta ma agụmakwụkwọ na football na-eduga na ya enwechaghị ihu. Nkwenye onwe onye na mkpebi siri ike nke nọgidere na-ekwu okwu ya kwụrụ ụgwọ ya dị ka Ethan na ndị òtù ya na U11 malitere ịgbasa ndekọ.
Ethan Ampadu Nwa akwukwo akụkọ Plus ekwusighi ihe omuma Eziokwu- Ụzọ Ebube
Mgbe ọ dị afọ 12, Ethan sonyeere n'egwuregwu asọmpi na Manchester. Ihe omimi a masiri onye obula n'ememe a, tinyere onye isi United United manager, Sir Alex Ferguson onye choro ka o banye Uhie Red. Ferguson bụ nnukwu Ampadu nke na-adabawanye karịa ọtụtụ ndị iro ya, nke na-enye ya ohere ijiri bọl ahụ.
O di nwute, nke a dara n'oge opupu ya na ndi isi ochichi site n'aka Ed Woodward si otú a mee ka onye ntorobịa na-acho mmasi igha.
Mgbe ọ dị afọ 15 ruo na Disemba 2015, ọrụ Ethan na Exeter City kwụsịrị.
N'oge a, a kwalitere ya na ndị otu egwuregwu Exeter City n'agbanyeghị na ọ ka na-agba bọọlụ na bọọlụ ya.
Ethan Ampadu Nwa akwukwo akụkọ Plus ekwusighi ihe omuma Eziokwu- Bilie na-ewu ewu
Ọ bụ na 9th ụbọchị nke August 2016, Ampadu malitere ịme akụkọ ihe mere eme site na imebi ihe ndekọ 87 afọ nke Cliff Bastin setịpụrụ. Ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ kacha nta nke Exeter City, (afọ 15 dị afọ 10 na 26 ụbọchị) iji mee ihe maka otu egwuregwu Njikọ. Ọbụna o nyere onye nke egwuregwu egwuregwu maka egwuregwu ahụ.
Oge a bụ oge ọ nabatara mba U17 welsh na Welsh, mgbe nke ahụ gasịkwara, ndị isi otu afọ n'afọ (May 2017).
Kpọmkwem na 1st nke July 2017, Ampadu bịanyere aka na ụlọ ọrụ London Premier League Chelsea FC. Mkpebi a mere mgbe ọ dechara akwụkwọ ma nyefee ya akwụkwọ nchịkwa nke Secondary Education (GCSE).
Na 20th nke Septemba 2017, Ampadu mere onye izizi ya na Chelsea na EFL Cup nke atọ gbara agba na Nottingham Forest. Ime nke a mere ya onye ọkpụkpọ mbụ amụrụ na 2000s iji kpọọ otu egwuregwu klọb. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu bụ akụkọ ihe mere eme.
Ethan Ampadu Nwa akwukwo akụkọ Plus ekwusighi ihe omuma Eziokwu- Ndụ mmekọrịta
Ọnye na-bụ Ethan Ampadu's Girlfriend?
Gwa eziokwu. Ampadu bụ onye onye ọhụụ ya mere ka ọ ghara ile anya n'ihu ọha n'ihi na ndụ ịhụnanya ya dị oke ala ma ọ dịkarịa ala ugbu a.
Ethan Ampadu Nwa akwukwo akụkọ Plus ekwusighi ihe omuma Eziokwu- Ndụ nke Onye
Tomata Ndụ nke Onwe Ethan Ampadu ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Ọ bụ onye kpebisiri ike ma kpebisie ike na ọ ga-eme nchọpụta ruo mgbe ọ chọtara ụzọ ọ ga - esi mee ya.
Ethan hụrụ Chelsea n'anya ọbụna mgbe nna ya bụ U18 Manager nke Arsenal. N'oge ahụ, ọ na-eleta Stamford Bridge nke Chelsea mgbe ọ dị afọ 15. Site na mkpebi siri ike na nkwenye onwe onye, ​​nrọ Ampadu nke igwu egwu na Bridge ghọrọ eziokwu.
Ethan Ampadu ruo ụbọchị ka na-eso ndị enyi ochie ya mara na ọ na-agbasi mbọ ike inweta otuto. Ọ na-emetụta ndị ọ na-anọchi anya.
Ndụ Ethan Ampadu's LifeStyle:
Ethan Ampadu bụ onye nwere ndụ pụrụ iche. Ọ na-enwe ike ịmere onwe ya ebe ha na-eme mmiri na ọdọ mmiri ya.
Ethan Ampadu Nwa akwukwo akụkọ Plus ekwusighi ihe omuma Eziokwu- Ndụ Ezinụlọ
Ethan Ampadu si n'ezinụlọ dị umeala n'obi. Kwame Ampadu na nwunye ya ọ hụrụ n'anya nwere obi ụtọ na ha jisiri ike nweta ihe kacha mma site na nwa ha nwoke bụ Ethan. Taa, nna na nwa nwoke nwere obi uto na mpaghara nke egwuregwu mara mma.
More banyere Nna Ethan Ampadu:
A mụrụ Patrick Kwame Ampadu na 20 Disemba 1970 na nne Irish na nna Ghana na Bradford, United Kingdom. Patrick Kwame n'agbanyeghị na a mụrụ ya na England weere onwe ya Irish n'ihi mama ya.
GỤ Nwa Gareth Bale Akụkọ Nke Na-emeghe Ihe Ndị Na-emeghị Eme
Ampadu gosipụtara maka klọb Arsenal, Swansea City, Leyton Orient na Exeter City na-egwu egwu nke si na 1988 ruo 2006 (afọ nwa ya nwoke malitere ọrụ ntorobịa ya). Patrick Kwame gosipụtara maka Arsenal n'etiti afọ 1988 ruo 1991.
Mgbe ezumike nká site na football club, Kwame Ampadu laghachiri Exeter ka ọ bụrụ akụkụ nke uwe ọzụzụ ọgbakọ. Nke a bụ oge ọ kpaliri nwa ya nwoke Ethan Ampadu ịmalite ọrụ ya na klọb. Onye Irishman mechara kwaga Arsenal na 2012 ebe ọ ghọrọ onye nchịkwa klọb n'okpuru 14 na n'okpuru 18.
Dị ka n'oge ederede, Ethan bụ onye na-enye aka na-enyere aka na Mona Mona na-arụ ọrụ na njikwa AS Monaco na Arsenal Akụkọ Thierry Henry. N'okpuru ebe a bụ foto nke ndị nlekọta abụọ.
Isi Ethan Ampadu- Inweta Eziokwu Eziokwu:
Aha nna Ethan bu Patrick Kwame Ampadu nke yiri ezigbo onye Ghana a ma ama na onye mmekorita Highlife nke ana akpo Patrick Kwame Ampadu. Ọtụtụ kwenyere na Ghanian Highlife artist nwere ihe karịrị ndekọ 800 bụ nwa nna Ethan.
N'adịghị ka ozi ụgha ahụ dị ka Kobby Kings nke Modern Ghana Online Media si kọọ, onye ama ama na-egwu egwu abụghị nna nna ma ọ bụ nna Ethan Ampadu.
Ethan Ampadu Nwa akwukwo akụkọ Plus ekwusighi ihe omuma Eziokwu- Eziokwu efu
Banyere aha ya:
Ndị ọrụ ibe ya na ndị otu egwuregwu akpọrọ Ethan “Ọzọ David Luiz“. Nke a bụ n'ihi ntutu ya na-atụ ụjọ nke na-akọwakwa ọdịdị David Luiz. Ndị na-agba ọsọ ụkwụ abụọ ahụ na-aghọta football dịka "egwuregwu mkpokọta”Na bromance ha bụ ihe pụrụ iche.
Enwere ike ịkụ egwu maka 4 Mba:
Ethan Ampadu nwere ndekọ dịka ụfọdụ ndị na-egwu egwuregwu nke ọma bụ ndị natara akwụkwọ ịkpọ òkù iji kpọọ 4 mba ndị ahụ; Ghana, Ireland, England na Wales.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Ọmụmụ Ethan Ampadu Ụmụaka ya na akụkọ na-abụghị eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Bọchị agbanwee: February 13, 2021